China Abs အဖုံး 2000+ Lithium ion battery - 12V 100Ah သည် BMS ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူနှင့်သက်ဆိုင်သည် LIAO
၁။ ပလတ်စတစ်အဖုံး 12V 100Ah လီသီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများကိုအဏ္ဏဝါအသုံးပြုရန်။
မက်စ် စဉ်ဆက်မပြတ်တာဝန်ခံလက်ရှိ 100A
မက်စ် စဉ်ဆက်မပြတ်ရိနာစွဲလက်ရှိ 100A
အလေးချိန် ၁၃.၅ ± ၀.၃ ကီလိုဂရမ်
အတိုင်းအတာ 342mm * 173mm * 210mm
လျှောက်လွှာ အဏ္ဏဝါအတွက်, power supply လျှောက်လွှာ, etc ။
3. ပေါ့ပါးသောအလေးချိန် - ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ခဲအက်ဆစ်ဘက်ထရီ၏ 1/3 အလေးချိန်။
4. Superior လုံခြုံမှု - LiFePO4 (LFP) သည်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်အသိအမှတ်ပြုထားသောအလုံခြုံဆုံး lithium battery အမျိုးအစားဖြစ်သည်။
၅။ အစိမ်းရောင်စွမ်းအင် - ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိပါ။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းပတ် ၀ န်းကျင်ကာကွယ်ရေးခေါင်းစဉ်သည်အာရုံစူးစိုက်မှုပိုမိုများပြားလာသည်။ သင်္ဘောစွမ်းအင်အမျိုးအစားများသည်ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းစွမ်းအင်မှအနိမ့်ကာဗွန်စွမ်းအင်သို့တဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလဲနေသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိမှုလမ်းကြောင်းသည်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာပြီး၎င်းကိုသင်္ဘောများပေါ်တွင်အားတက်သရောတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းစတင်ခဲ့သည်။
လျှပ်စစ်သင်္ဘောများတွင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု၊ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်သုံးစွဲမှုကုန်ကျစရိတ်နည်းခြင်းတို့၏အကျိုးကျေးဇူးများရှိသည်။ ဒီဇယ်နှင့် LNG လောင်စာဆီများထက်သူတို့၏လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်သည်သိသိသာသာနိမ့်သည်။ ထို့အပြင်လျှပ်စစ်သင်္ဘောများသည်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံရိုးရှင်းပြီးလည်ပတ်မှုတည်ငြိမ်မှုနှင့်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်နည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့်အနာဂတ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းများအတွက်ပိုမိုသင့်တော်သည်။
ဘက်ထရီအမျိုးအစားရွေးချယ်မှုအရခဲ - အက်စစ်ဓာတ်ခဲများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကလီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီများသည်လုံခြုံမှု၊ စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆနှင့်သံသရာစွမ်းဆောင်ရည်တို့တွင်သိသာသောအားသာချက်များရှိသည်။ သို့သော်၊ လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီများသည်စွမ်းအင်ဘတ်စ်ကားအသစ်များနှင့်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနယ်ပယ်များတွင်ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုလျက်ရှိသည်။ လျှပ်စစ်သင်္ဘောများတွင်အသုံးပြုသည့်လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီများသည်နည်းပညာဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုများကိုပိုမိုကြုံတွေ့ရမည်ဖြစ်ပြီးပိုမိုတိကျသောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ထုတ်ကုန်စျေးနှုန်းများမြင့်တက်မည်ဖြစ်သည်။
Lithium iron phosphatismate prismatic power ဘက်ထရီများသည်လုံခြုံမှု၊ သံသရာနှင့်နှုန်းအရပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောအဓိကဘက်ထရီများဖြစ်သည်။ အနာဂတ်တွင်လျှပ်စစ်သင်္ဘောများအသုံးပြုသည့်လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီများ၏အချိုးအစားများလာသည်နှင့်အမျှထုတ်ကုန်များ၏စျေးနှုန်းသည်အောက်သို့ကျဆင်းသွားလိမ့်မည်။
အနာဂတ်တွင်သင်္ဘော lithium ဘက်ထရီသည်အဓိကအားဖြင့်ကူးတို့လှေများ၊ အပန်းဖြေလှေများ၊ ကုန်းတွင်းကုန်တင်သဘောင်္များ၊ မြစ်ကမ်းတစ်လျှောက်ကမ်းရိုးတန်းမြို့များရှိဆိပ်ကမ်းတံတားစျေးကွက်များစသည်တို့ကိုအဓိကအာရုံစိုက်သည်။ ၎င်းသည်သင်္ဘောများတွင်လီသီယမ်ဓာတ်ခဲများကိုအသုံးပြုမှုကိုအရှိန်မြှင့်တင်ပေးလိမ့်မည်။
ရှေ့သို့ Bolt အမျိုးအစား prismatic 3.2V 10Ah LiFePO4 ပါဝါထောက်ပံ့ရေးနှင့်စွမ်းအင်သိုလှောင်ဘို့ဘက်ထရီဆဲလ်
နောက်တစ်ခု: တရုတ်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သူ ၁၉ လက်မအရွယ်ထိန်သိမ်းထားသော 48V 50Ah lithium ion battery (LiFePO)4) ဆက်သွယ်ရေးသည်